Muuse Geelle oo loo doortay Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka ee FEIT – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Muuse Geelle oo loo doortay Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka ee FEIT
January 15, 2022 Xuseen 22
Muuse Geelle Yuusuf, ayaa loo doortay Guddoomiyaha cusub ee Guddiga Doorashooyinka heer Federaal ee FEIT, kaddib doorasho goor-dhaweyd ka dhacday Teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho.
Muuse Geelle ayaa helay 14 cod, halka musharraxa la tartamayay oo lagu magacaabo Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadan uu helay 11 cod.
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha XFS iyo Madaxtooyada Puntland ayaa u olaleynayay Muuse inuu kusoo baxo Guddoomiyaha, halka musharrax la tarmayay ay wadatay Madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo qaar kamid ah dowlad goboleedyada dalka.
Waa billowgii guuldarrada fidna wale farmaajo,
Waa ku daayey Qaswade Farmaajo waxaanse la yaabay Midowga Musharaxiinta qaar ka mid ah ee u ololaynayey ninkii ay wateen Farmaajo iyo Lafta Gareen inkastoo qaar kale oo Midowga Musharaxiinta ah ay ayaguna taageerayeen Gudoomiya cusub ee la Doortay.
Hambalyo Raysal Wasaare Rooble Madaxweyne Saciid Deni guusha Aad gaadheen ( Walaalaha Mudug ) horaa loo yiri Siyaasada malaha Saaxiib joogta ah.
Xaarmaajo daadkaa qaaday
Shaxda siyaasadeed sideedaba sheed baa lagasoo dheelaa. Farmaajo in uu dalka gees udhaafo waa wax aynu u wada taamaynno, laakiin in isaga jabkiisa Siciid Dani iyo Axmed Madoobe loomaro oo laguna nisbeeyo waxay jab weyn iyo taariikh xumo ku noqon doontaa magaca iyo tolnimada ay saddexdooduba ku abtirsadaan.
Cawaaqib-xumada iyo khatarta ku dhex miineysan in Siciid Dani iyo Axmed Islaam jabka Farmaajo loo adeegsado waa in si taxaddar leh looga foojignaado intaynu caadifadaha iyo xamaasadaha maran ka weynaanno – haddii aannu nahay sokeeyaha Puntland iyo Jubbaland ku abtirsada.
Waxaana kamid ah in hadhow eedeymihii iyo iimihii Farmaajo loo sawiri doono oo loona fasiri doono guuldarrooyin Soomaaliya iyo Soomaaliba kasoo gaadhay Daarood oo dhan, lagana yeelan doono borobagaan qaawan oo isla Siciid Dani iyo nin kale oo Daarood u dhashayba ku noqon doona caqabad weyn oo iskaga gudubta in ay Soomaaliya madaxweyne dambe ka noqdaan.
Waran dib kuugu wiiqi doona lama warfiyo.
Waxaa la yaab in odayga Awlal aanu is maqlin, marka uu annaga oo reer Somaliland ah wax naga sheegayo wuxuu yidhaahdaa , annigu qabiili ma ahi , cidna qabiil kuma maaqo ee Somali jaceyl baa I wada, SOMALIDA oo dhan baan jeclahay, midnimf Somaliyeed bana rabaa. Marka uu doonanona sida kale buu u roga oo ah ” Ła Jiifiyaana Bannaan” oo Al-Daaroodiya buu Ła soo baxa sida maqaalkisa kore, oo ku leeyahaym Farmaajo waan necbahay waxaanse ka sii necbahay Hawiye iyo Somalia kale, gar iyo gardarro. Wallee Somali isma khalado. Annagu labadaba waa oggolnahay ee mid uun noola kaalay
qof iyo qabiil
qabiil iyo tol
caqli kale ma jiro
aaway dantii iyo ujeedooyinkii umadeed iyo tiirarkii aad sheegi jirtay ee dad isku keenka ahaa mise (baho) ayaad u ordeysay intaanoo dhan?
Faroolaha hal wasiir baa naga jira xamar leh maxaa dhaantaa?
musharaxiinta xamar aag aaga u qeybsaday caasimada maxaa dhaantaa?
xisbi beeleedyada ku kaltama hargeysa maxaa dhaantaa?
Awlal wax heyb ka weyn ayaa ifaaflo mustaqbal gala!
Awlal cidina akhrin mayso waxa aad soo qortay
Xaarmaajo Bye bye
HORTA GUDDIGA DOORASHOOYINKU MA IYAGAA MADAXWEYNAHA DOORANAYA, SIDEE SAAMAYN UGU YEELAN KARAA XUBNAHA LA DOORANAYO, MA ISAGAA GOAAN KELIDII QAADAN KARO MISE GUDDI BUU XUBIN KA YAHAY
@@ Ali Jaama aka…,
Waxaa jirta qaacido suugaaneed oo Carabtii hore lagasoo waariday oo tiraahda: ‘Likulli Maqaamin Maqaal’. Murti kasta madal bay leedahay.
Haddii aad ahaan lahayd nin weyn oo caqligiisu iyo xiskiisu taam yihiin, waxaad garan lahayd in sikasta oo ay Soomaalinimadu naga dhexeyso, aynu haddana hoos ahaan qabaa’il iyo degaannadooda usii kala baxsannahay oo sidaas aawadeedna ay murtidu marba madal taallo oo heerkaasna talooyinka iyo faallooyinka lagu dhiibto.
Waa waaqici jira in qaran-li’idda Soomaaliya kuhabsatay ay Soomaalidu (khaasatan Isaaqa aad kadhalatay) qabiil ahaan isugu aaneeyaan oo weliba Daaroodka eeddeeda loo saaro. Intii aad adiguba Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirro oo Muuse Biixi oo madaxweynaha Soomaaliya ah lid ku ah kulatalin lahayd ayaan aniguna tolkayga kutaliyay.
Maxaa ceeb ah oo kujira? Sidee bay taasu qabyaalad ku noqonaysaa?
Qofka bini-aadamka ah waxaa u fiican inuu meel loogu soo hagaago yeesho, Qaran & Qabiil la iskuma khaldi karo, waa dąb iyo dhagax ama dab iyo bansiin, anigu kuguma diidin inaad qabiilkaaga guubaabiso oo dhexdooda isu soo dhoweyso waxaanse kugu diidday, marna fikirkaygu qaran buu ku salaysan yahay marna qabiil. Anigu Muse Behi iyo mucaaradka ma idhaahdo isku-reer baad tihiin ee wada dhuuqa, waxaan raacaa hadh cad mid uun, inkasta oo aanan waligay vote garayn,
Awlal halkan taxan usoo galna inaan cabbirno caqliga, fikirka iyo garaadka asxaabta halkan ku faallooda, si aan xog u ururino oo feker sax ah oo ku dhisan qualitative research meeshan uga ururino, meeshan fikirka dhallinta Puntland baan ka eegnaa, oo Awlal ugu horreeyo. Adiga ayaan waxoogaa kuu yara-hanweynaa markaa aad baan uga xumahay qiyaastaada aan fadhiyin ee sida aad sheegtay hadba marxaladda markaa taagan isla bedesha, from now and onwards we have to call you ‘fickle’ a man constantly changing his mind
Kkkkk Majeerteen iyo Isaaq dad waalan 8n ay yihiin bal ila eegga.
1-Guddoomiyihii hore muxuu saamayn ah oo uu lahaa?
2-Guddoomiyihu ma wax buu doortaa?
3-Guddoomiyuhu hab raaca miyuu maa mulaa?
4-Doorashada malaga saaray gacanta maamul goboleedyada?
BOOWE AALA TAHAY DENI ZINJIBAARI INUU MADAXWEYNE NOQDO.
Ninka Cismaan Maxamuud maareyn waayay Somali ma maareyn karo.
Guddooyiyuhu shaqadiisu waa inuu hubiyaa hab raacyada isagoo la tashanaaya gudigga heer maamul goboleed siyaasadan intii aad taqaaneen wey dhaaftay.
Waak u salaamay marka hore.
Ma aqaan inaad hore u taqaanay qofkan wata magaca awlal sida uu uga “doodo” makhaayadaa fadhi ku dirirka ah. Laakiin waxaan anigu ku siinayaa keliya daraasad aan kaga sameeyay ku dhawaad 2 sano oo aan Puntland Times soo galo.
1. Waa qof reer-koodu tacliin u direen, kuna tacab khasaareen. Waali qaca!
2. Waa qof aad uga hela in magaca uu sito la soo qaado ama loo jawaabo, ka dibna qoraal dheer oo bilaa nuxura soo dhiga mareegto ama maqaaxiyaa fadhi ku dirirka.
3. Waa qof laba wajiila ah oo mar Puntland si dadban u caaya/ amaana, mara Farmaajo dabada u ruxa.
4. Waa qof hadii Somaliland, Eeba-heena, Ilaaheena Waaxidka ah, albaaba-da Janada ka furo odhan kara cadaabta ayaan sugayaa.
Colaada intaa leeg waxa ku kelifayna isaga uun ayaa og.
Gunaanad & Geba gebo,
Mr Man ; qoraal iyo wakhti ha iskaga khasaarayn sitaha magaca Awlal.
@Laalays aka Yoocada aka…,
Farqiyada aniga iyo idinka inoo dhexeeyana waxaa kamid ah:
(i) In aanan anigu runta iyo xaqa ka beensheegin oo eex qabiil iyo casabanimo aawadoodna wax u dadin. Dadka ilbaxnimada iyo xadaaradda usaaxiibka ah ayaana astaantaas lagu amaanaa – diiniyan iyo sikastaba.
(ii) In dadka astaantaas lagu garto ay dalkooda, degelkooda, mise dadkooda waxa ka qaldan si caqliyeysan oo cilmiyeysan unaqdiyaan oo nalkana ugu ifiyaan si loo ogaado oo la iskagana saxo.
Waana dhaqanka ay bulshadaha caalamka uugu hormarsan ku hanteen mansabkaas sarreeya iyo dawlad-wanaagga ay kucaanamaaleen.
Naqdimahayga Puntland ku aaddanna, waa kuwo aan ka dhiibtay websitekan Puntlandeyska ah oo waxaan ahay nin daartiisa kadhex caweynaya oo arrimaha aqalkiisana qoyskiisa kala xaajoonaya. Idinka weeye – iiddoorow – kuwa dadka kale muusaskooda danfadhiga ku noqday oo xaafado aan lagu casuumin dadkii lahaa kudhex caayaya – illayn caado ceeb ma aha e.
Haddii aan Puntland kanaqdin lahaa websiteyo kale, markaa aniga ayaa noqon lahaa doofaar aan damiir lahayn oo ay ceebi kudhantahay – haddase maya! Waan ogahay oo maryooleey dhib weyn baa nakalahaysta, sababtuna ay tahay in aan dhaqankeeda gurracan kudhex dhalan oo kudhex barbaarin – nasiibwanaag – balse aan aadmiga kale lasoo dhaqmay.
Oo ma waxaa la doortay nin gabi-giisuba wada Putlayna?!
Halkaa Rooble tacab-khasaar baa kaga dhacay. Waxa aan maqli jiray, “Timir siib oo Tii-Tiin abuur.” Waxa kale oo meeshan laga fahmi karaa in dagaalka hoggaanka dalku uu u dhaxeeyo, hadduuba dhaco, xafiiska madaxweynaha & Garoowe. Aaway nimankii safka soo geli jiray, ee “midawga murashixiinta” sheegan jiray?! Uyaku murashax ma wadanin miyaa? Rooble murashax ma wadanin miyaa? Waayo, waxaa igu maqaalo ah in murashaxa kale ee ninkan la tartamayey uu xafiiska madaxweynaha & kooxdiisa ka socday.
Gunaanadkii, Roobloow boqontaag iska toogatay, dhakhsana waad u dhutin-doontaan adiga & musdanbeedkaagu.
Wax kale ma qaban kara e, malxiisayntaan “qash-qashaad & luggooyo” ka baxaynin!
Manta marqaankii baan kajiiray oo waa kuwaas meeshaba kayaacay!
Itaalkoodu waa intaas: FACTS AND FIGURES marka lahordhigo ayay inta afka furtaan big yiraahdaan!
Buufi cayayaanka iidoor Wagashle awal Hawiye Hutu baan isheynay waaba nasab Hawiye. Iidorow ku ekeda Website yadiina idin kugu ma nimaano idin ma cayno wali waa idinka nabad geli la’nahay ku ekaada (BBC, VOA, IYO HORN CABLE KIINA) ileen adoon waa adoon waligii maskixiyan BUU Nigger ka ahaanayaa war anaka idin maanan adoonsan ee CIISE Samaroon iyo Daarood baa idin xoreynay sow miinan odhan sinjiga Somali baan ka baxnay oo Wagashle baa nahay Ethiopia baa noo Sokeysa yaah oo dhulkii Somaliyeed maanta halis uguma jiro khasatan Magaaladayadii Saylac in yahuudu u gogol xaareyso in Ethiopia qabsato. Saylac waa dhul Daarood CIISE iyo Samaroon Egypt imaan meyso Ethiopia NA imaan meyso.
Adeerayaalow iska marqaama oo na daaya dhib kiinaas bar bar nagala mara baan 30 Sano idin ku heynaa kaliya ka fogaada meelaha taarikhigaa hanaga qufanina idinka iyo uk 🇬🇧 morons fuck off oo na dhaafa Ku ekeeda dhulkiina isagaan silig baan iskiin xidheynaa insha Alaah daroogadiina, Khamridiina, Alshaydaan kiina iyo Aids kiina insha Alaah wayna dhowdahay ma foga iidoor marqaansan Somali oo dhana halis ku ah kan Djibouti 🇩🇯 kan puntland, Kan jubaland, kan SW jooga, iyo kan Mogadisho jooga ee qaraxa iyo shidada ku hayeen 29 Sano ee bilaashada Alshaydaan 1993 Mujrimka Habar gidir HASSAN DAAHIR AWEYS iyo waxay ugu yeeraan URUR SAMALE.
m Hassanb says:
Jirax waa Daaroodka yaryarka ah ee Leylkase amid Awrtable, Abasguul iyo waxaa, ma aha, Majeerteen, Dhulbahante, Ogaadeen , waayo sidaa uma hadleen, saadada kuma sheegeen addoon, dad la hayo halkay ka soo jeedaan Soomaali oo raadkooda muuqdo iyo qabuuruhu waa iyaga qudha, taas cidna la weydiin maayo, markaa Jirac magacaba ka garo, waa dada Somalia uso raacay jamhuuriyadda 1960 la asaasay, taas oo berigii lixdankii qiiradii iyo amxaaro necaybkii dad badan hosta lasso gashaday, ujaajeen, weyteen, iwm. weligii meel durriyaddu joogto muuba arag
Aad baan kuusalaamayaa Caaqil. Waxaad kasanqarisay qodob aan muhiim u ah oo taariikhduna marag ka tahay; waana in gobolka Awdal asal-ahaan Daaroodku iyo abtiyadood Ciise iyo Samaroon leeyihiin oo qarniyo badanna difaaciisa jihaad adag kusoo galeen.
Daraasaad sanado dhowaa lagasameeyay Berbera ayaa waxaa laga ogaaday in magaalada iyo dekadduba ilaa 50% daaraheeda ay leeyihiin Warsangeli, Dhulbahante, iyo Ogaadeen.
Waxaana halgan culus oo bililiqo qaawan iyo inkiraadba isugujira (Xamar sideeda) oo xaqiiqadaas lagu duugayo halkaas kawada Muuse Biixi iyo ganacsato iyo siyaasiyiin ay isku beel yihiin.
Waxaa lahayaa odayaal Ciise iyo Samaroon iyo xataa Isaaq ah oo dhaar kumaraya xaqiiqadaas iyada ah. Puntland Times waxay ibtilo kudhigtay in aan lasoodhigi karin wax ‘links’ ah – khaasatan kuwa youtube-ka ah. Guulwadaha SNM ee magacyada badan halkan kusoo galana dulmigaas ayuu safka hore kagajiraa oo xaqa iyo runta ayuu dadayaa.
Salan sare walalkay sidoo kale
Waxaan mar hore baan aragnay Magaca ay wataan iyo siday u aradan yihin xaqa taariikhda. Sida la ogyahay oo xaqiiqada ah saylac awoowayaashayo baa ku aasan Berbera anakaa aas aasnay Mogalada guri kasta oo ku yaal waa la yaqaanaa reerka leh ee harti iyo Ogaden. Markaan maqlay saylac iyo marka waa aasan yihin waxaan u qabi jiray wax iska maalaa yacni ah ilaa la’ii xaqiijiyey in marka Daarood Isaaq aasaan ilaa hada magac xuna ugu bedeleen “DAAROOD KU XAAR” waxaa kaloo la’ii sheegay “CEEL SHEIKH” inay tahay magaalo aasan oo dadka ku aasan dhamaan toos yihin Daarood markii Boqortooyadeenii ADALITE xoolihii iyo ciidankii ka kaxeysatay si loo difaaco saylac iyadiina la qabsaday oo dhulka lala simay. Waxaas oo taariikh ah waxaan maqli jiray “CIRINTII OO MADAXA LOO ROGAY” adoontii ayaa maanta Mojority ah way dadaalayaan Reer Awdal tabartood maanta waa adoon tii baa Daarood CIISE iyo SAMAROON la siman. Taariikh da awoowayaashayo baa hada qabiilada qaar sheeganayaan. Marka la yaab leh 1991 bay xoreebeen iidoor Wagash iyo Hawiye Hutu” waa “CITIBTII OO MADAXA LOO ROGAY” BISMILLAHI RAHMANI RAHIM
Nimankiinaan masomaalibaadtihiin,ninja farmajo maanta jecel inuu kursiga waayo iscun oo is caqali, 30sano kadib baad rabtaa inaan halaga ku sii jiro yaahuu ,farmajo ummada somaaliyeed intii waxagarada baa rabta,khaasatan dummarka iyo caruurta baabay BAA raba inshallaha isagana ku gumeeyesanaya 10sano.soosocotana isagaa dalka hogaaminaya inshallahaa
DAAWO: Juxa “Farmaajo iyo Kheyre, dadka Soomaaliyeed cafis ha weydiistaan, Magdhowna ha bixiyaan” by Xuseen | posted on January 26, 2022
Faysal Cali Waraabe oo ugu baaqay Siciid Deni in uu eryo Axmed Karaash. by Farah Abdikadir Mohamed | posted on May 28, 2020